သူကြီးမင်း (တုံးဖလား): ဂိဟိဘာဝ ဒုက္ခ (အားကျပြီး လူဝတ်လဲမိရာဝယ်...)
အင်း..တစ်ခြောက်လုံးမှာ ရေးတဲ့စာကို ပထမဆုံး comment ပေးရလို့ ကျွန်တော်လည်း တစ်ခြောက် လုံး ပါတယ်..:D
“အားကျပြီး မိန်းမယူမိရာဝယ်” ဆိုတာလေး လုပ်စမ်း
Friday, 11 November 2011 at 02:45:00 GMT
haaaaaa--------yu chin own . ti pi lar?
Friday, 11 November 2011 at 02:49:00 GMT
ထိပ်ဆုံးက သင်္ကန်းသက်က ဘယ့်နှယ် နှစ် ၃၀ ဖြစ်နေသတုန်း.. သူကြီးရ... ဒီတစ်ခါတော့ သူကြီးမဟုတ်တာသေချာပါ၏... :D.. ကျူပ်တို့ သူကြီးက လူပြိုကြီးဆိုတာ သတင်းရထား၏.. ဟိဟိ
Friday, 11 November 2011 at 03:00:00 GMT
ဟား ဟား ဟား။ မောင်နေ၀သန် တော်တယ်။
ပြင်လိုက်ပြီ။ ၂၀ လို့။
၃၀ ဟုတ်ဘူးးးးးး။း)
Friday, 11 November 2011 at 03:06:00 GMT
“အားကျပြီး မိန်းမယူမိရာဝယ်” ဆိုတာလေးရေးပါအုံး
၁၂.၁၂.၂၀၁၂ မှရေးမယ်တော့ မလုပ်နဲ့နော်
Friday, 11 November 2011 at 04:08:00 GMT
Friday, 11 November 2011 at 04:09:00 GMT
သာဓုပါဗျာ။ သင်္ခန်းစာ ယူသွားပါတယ်။ :)
Friday, 11 November 2011 at 05:37:00 GMT
ဖတ်လို့ကောင်းတယ် လူ့ဘောက်ဒုက္ခတွေက ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းကို မြင်ရတာပဲ :)
Friday, 11 November 2011 at 09:46:00 GMT
၁ ခြောက်လံုး အမှတ်တရကို ခပ်ပြုံးပြုံးဖတ်သွးတယ် သူဂျီး..
အော် ရဟန်းလူထွက်ကလည်း လု့ဘောင်လောကနဲ့ အံမဝင်ဖြစ်နေတာ ရယ်စရာပြုံးစရာရယ်..
၁ခြောက်လုံးမှာ ကိုကိုမောင်လဲ ပြုံးနိုင်ပါစေကြောင်း...
Friday, 11 November 2011 at 20:51:00 GMT
ကိုကိုမောင်တစ်ယောက် 'ဘုရားရှိခိုးလိုက်၊ စာလေးကျက်လိုက်၊ တရားလေးထိုင်လိုက်နဲ့ အဆင်ကို ပြေလို့' ဆိုတဲ့ဘဝကို အားကျမိတာတော့ မဟုတ်လောက်ပါဘူးနော်း))
Saturday, 12 November 2011 at 04:45:00 GMT
another round ;)
Saturday, 12 November 2011 at 09:24:00 GMT
Sunday, 13 November 2011 at 03:05:00 GMT
သူကြီးမင်းက ဒီလိုလေးကော ကြားဖူးလား ဟိုဝါလေ ဘုန်းကြီးလူထွက်က သူ့ရည်းစားနဲ့ တွဲပြီး လမ်းလျှောက်သွားတယ်။ တစ်နေရာရောက်တော့ သစ်ပင်ကြီးကြီးတစ်ပင်တွေ့တယ်။ သူ့ရည်းစားက "မောင် ဟို သစ်ပင်အောက်မှာ..."လို့ ပြောမလို့ရှိသေး "ဘုန်းကြီးဘ၀တုန်းက သစ်ပင်အောက်မှာ တရားထိုင်ခဲ့တာ ပြန်အမှတ်ရတယ်"တဲ့။ အင့် တုံးလိုက်ထှာနော်။ ဘုန်းဘုန်းတောက် လူထွက်ရင်တော့ အဲဒီလိုကြီးတော့.................။
Sunday, 13 November 2011 at 17:58:00 GMT
ဟီးဟီး။ ရယ်လိုက်ရတာ ပြောမနေနဲ့တော့။ (ကြံကြံဖန်ဖန်ပဲ ရေးတတ်ပါ့) ထပ်ဖတ်သွားပါတယ်ရှင်။
Sunday, 13 November 2011 at 18:37:00 GMT
အင်းးး အင်းး သေချာတယ် သေချာတယ်
Monday, 14 November 2011 at 07:30:00 GMT
သူကြီးက ဘုန်းကြီးလူထွက်ဆိုရင် အခုအချိန်လောက်ဆို မာတုဂါမလေးတစ်ယောက်နဲ့ နှစ်ပါးကြည်နေရောပေါ့...ပြီးတော့ ဘာတဲ့ ...“ ကာမဂုဏ်လေးများအလိုရှိရင်လည်း ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောပါဘိ ” တွေဘာတွေ တတ်မှာပေါ့... အခုကြည့် တို့သူကြီးခမျာ ဘယ်ကလောက် ရိုးသားရှာသလဲ မိန်းကလေးများဆိုရင် စေ့စေ့တောင် မကြည့်ရှာဘူး...( ကြိုက်မိမှာစိုးလို့ ... ဟဲ ဟဲ )
ဘုန်းကြီးလူထွက်တစ်ယောက် မိန်းမယူပြီးတော့ တစ်နယ်တစ်ကျေးကို ခရီးထွက်ကြပါလေရောတဲ့...ရာသီကလည်း ဆောင်းတွင်းကြီးဖြစ်ပြန်တော့ အအေးဒဏ်ကို မခံနိုင်တော့တဲ့ လူပြန်တော်ဘုရားက သူ့မိန်းမဘက်လှည့်ပြီး “ သူ့ရွာ...သူ့ပြည်...ချမ်းသလေ...စောင်ကော ” ဆိုပြီး စောင်တောင်းတယ်ဆိုပဲ သူကြီးရဲ့...ကမ္ပ၀ါဖတ်နေကျဆိုတော့ “ သုနာ...သုတေ...ဘန္ဒေ...သံဃော” ဆိုတာနဲ့လည်း အထာကျနေရဲ့ မဟုတ်လား...
တစ်ခြောက်လုံးမှာ သူကြီးတို့ ရေးနိုင်ပေမယ့် ကွန်ပျူတာ နှာစေးသွားရှာလို့ လွတ်ပြန်ပေါ့ တစ်ရက်...
Monday, 14 November 2011 at 14:38:00 GMT
တဂျီးမင်း ကိုယ်တွေ့ လားဗျ..မဟုတ်နိုင်ပေါင် လူပြိုကြီးဟု သတင်းရထားသည်..:P
Tuesday, 15 November 2011 at 03:26:00 GMT
သူများရဲ့ စိတ်ကူး အိပ်မက်လေးတွေကို ဒီပို့စ်ကြီးနဲ့ ဖျက်ပစ်တယ် လူဇိုးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး
အခုတော့ အသစ်ပြောင်းသွားပြီ . . . နှစ်ယောက် တခါတည်းပဲ ယူလိုက်တော့မယ် . . ဟဟဟ
Tuesday, 15 November 2011 at 09:52:00 GMT
မနေ့ကပဲ မဒိုးကန်နောက်ကနေ ကွန်မန့်တင်လိုက်ပါသေးတယ်...ဘယ်များခြေထောက်ပေါက်သွားပါလိမ့်...
အားကျပြီး ဘာညာကွိကွ...နောက်ဆက်တွဲပို့စ်များကိုလည်း စောင့်မျှော်လျှက်ပါဗျား...
Tuesday, 15 November 2011 at 12:55:00 GMT
ဒီကွန်မင့်လေး ရောက်ခဲ့လာမှ ဆရာ့ကွန်မင့်တစ်ခု ပျောက်နေတာ သတိထားမိတယ်။ ဆရာ့ကွန်မင့်ကို မနေ့က အီးမေးလ်ထဲကဘဲ ဖတ်ခဲ့တာလေ။ ဘလော့ကွန်မင့်ထဲမှာ မဖတ်ဖြစ်ခဲ့ဘူး။ အခု စစ်ကြည့်လိုက်တော့မှ Spam ထဲ ရောက်နေတယ်။ ဆရာကွန်မင့်နဲ့ နောက်ကွန်မင့်တစ်ခုလေ။
ဆောရီးနော် ဆရာ။ နောက်ဆို Spam ထဲ ခဏခဏ ၀င်ကြည့်မှ။ တော်ကြာ သူတို့ကွန်မင့်တွေ ဖျက်ပစ်တယ်ဆိုပြီး ဒေါသပွါးတာ ခံနေရမှာ ကြောက်ရတယ်။ ဘယ်သူ့ကွန်မင့်ကိုမှ တစ်ခါမှ Delete မလုပ်ခဲ့ဖူးပါဘူး။
Tuesday, 15 November 2011 at 13:08:00 GMT
Wednesday, 16 November 2011 at 10:50:00 GMT
ကိုတင်ဖေကြီးမေးတော့ အဆင်ပြေပါတယ် အားလုံးရှောရှောရှုရှုပါပဲလို့ပြန်မဖြေမိတာကံကောင်းပေါ့း)
Thursday, 17 November 2011 at 02:51:00 GMT
ရှောရှောရှုရှုဆိုတာ ဗမာစကားရှိသလားသိဖူးဗျာ့ တိန်း)
ရှောဆိုတာက ချောတာ ရှုဆိုတာကမွေ့ ချောမွေ့တာကိုပြောတာထင်တာပဲ
Thursday, 17 November 2011 at 02:53:00 GMT
Tuesday, 22 November 2011 at 11:41:00 GMT
သူကြီးတစ်ယောက် ဘာတွေကြံစဉ်နေပါလိမ့်...စာလေးဘာလေးများလည်း ရေးစမ်းပါဦးတော့...အိုဖို့အတွက်များကြိုးပမ်းနေရော့သလားမသိ...သူကြီးစာလေးတွေမဖတ်ရတာကြာတော့ သတိရသဗျား...
Tuesday, 29 November 2011 at 13:47:00 GMT
မိန်းကလေးက လာဆိုပြီး လက်ဆွဲခေါ်သွားတယ်တဲ့.. အဟိ.. ရှက်ချာကြီး
ရီရတယ်.. :P :D :D
Friday,2December 2011 at 14:46:00 GMT
custom essays writing service online said...
anymore, to die purposelessly anymore, to get injuries anymore. custom essays writing service online
Tuesday, 8 January 2013 at 14:54:00 GMT